प्रधानमन्त्री काकालाई भतिजको फेसबुके चिट्ठी ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	प्रधानमन्त्री काकालाई भतिजको फेसबुके चिट्ठी ! » Nepal Fusion
प्रधानमन्त्री काकालाई भतिजको फेसबुके चिट्ठी !
काका, हाम्रो देशका नागरिकहरु सिमापारी घामपानी सहेर खुला पाखामा छन् । महाकाली पारी भेला भएका नेपालीको हरिबिजोग त शब्दले वर्णन गर्न सकिन्न । तिनीहरुलाई भारत सरकारले लगभग बेवास्ता गरेको छ । तिनीहरुलाई सुत्ने, खाने र विरामी भए उपचारको व्यवस्था छैन । कोरोना सर्ने डरका बीच भिडभाडमा नेपालीहरु भोकभौकै बसेका छन् । कसैकसैले त्यो असह्य स्थितिबाट छुटकारा पाउन महाकाली नदी पौडेर पार गर्ने जमर्को गरेका थिए । तिनीहरुलाई कट्टु मात्रै लगाएको अवस्थामा गिरफ्तार गरेर प्रहरी चौकी लाँदै गरेको फोटो/भिडियो हामीले देख्यौं, तपाइँले देख्नु भएन होला । आमाको मृत्युमा समेत घर आउन नपाएर महाकाली पारी नै काजकृया गर्दै गरेको फोटो सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । कतिदिन देखि गास न बास भएर मानिसहरु आफ्नो घर हिँडेका छन् । जागिरदाता एवम् घरभेटीले मजदुरका परिवारलाई असहयोग गरेका छन् । सरकारी राहत समेत साथमा नागरिकता नहुनेले पाएको छैन । गास न बास भएर घर हिँडेकालाई प्रहरीले बाटोमै भाटा हानेका छन् । कतिलाई बिचबाटोबाट अघि बढ्न दिइएको छैन । उनीहरु न गन्तव्यमा पुग्न सक्छन् न फर्किन । हिजो मात्रै पुलमा लगाएको छेकबार माथि उक्लेर पुल पार गर्न खोज्दो खोलामा जाकिएर एक बटुवाको मृत्यु भयो । के सिंहदरबार र बालुवाटारमा बसेकाले जनताका यी अनेक हण्डर देख्दैनन् ? अघिल्लो वर्ष झापाको हडिया बुधबारेमा सडकमै गाडी रोकेर तपाइँले एउटा बालकलाई एक हजार थमाएर ‘अब यो देशका नागरिकले भोकै मर्नु पर्दैन’ भनेको बिर्सिनुभो ? काठमाडौंमा डेरा गरेर बस्ने, दिनहुँ ज्यालादारी गर्ने, सानोतिनो पसल चलाएर दिनहुँ गुजारा गर्ने मानिसलाई तपाइँको सरकारले के सहयोग गर्यो ? कुनै जवाफ छ ?
काका, मृगौला फेरिएलगत्तै तपाइँ सक्रिय हुन सक्नुभो । त्यसका लागि बधाइ एवम् अझ सक्रियताका लागि शुभकामना । तपाइँका मृगौला जत्तिकै छरितो सँगले तपाइको आखा र कानले पनि काम गर्न सकुन् । जनताका गुनासाहरु मिडिया र सोसल मिडियामा छरपस्ट छन् । अब अर्को टेलिभिजन सम्बोधनभन्दा अघि नै केही गर्नुहोस् ताकि टेलिभिजनमा देखिने बेलामा यति त गरे भन्न पाइयोस् । फेरि “मैले थाहै पाइन” भन्न नपरोस् ।